Obelahlekile kutholakale isidumbu sakhe eNonoti | News24
Obelahlekile kutholakale isidumbu sakhe eNonoti
Isithombe: SithunyelweImoto kamufi etholakale eThembeni.
ABASOLWA abathathu abaneminyaka ephakathi kuka-18 kuya ku-48 bavele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngoMsombuluko, ngomhla ka-21 kuLwezi (November).
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Colonel Thulani Zwane uthe basolwa ngecala lokubulala, ukuduna imoto kanye nokwamukela impahla entshontshiwe.
Uthe: “Ukuboshwa kwabo kulandela ukulahleka kukaMnuz Jayram Pillay, oneminyaka engu-52, owase Glenhills, olahleke ngomhla ka-17 kuLwezi. Umufi ubeshayela amatekisi asebenzisa imitha endaweni yaKwaDukuza ngenkathi elahleka. Kuvulwe idokodo lo muntu olahlekile emaphoyiseni aKwaDukuza,” kusho u-Colonel Zwane.
Uthe amaphoyisa afune uMnuz Pillay ngoLwesine nangoLwesihlanu oledlule.
Uthe: “Uphenyo luholele ithimba labaseshi eThembeni lapho okwadayiswa khona imoto kamufi. Abasolwa baboshelwe ukutholakala nemoto entshontshiwe, ukubulala kanye nokwamukela impahla entshontshiwe. Isidumbu sikamufi sitholakale emobeni waseNonoti sinamanxeba okugwazwa esifubeni. Abasolwa ababili babhekane necala lokubulala kanye nokuduna imoto kanti oyedwa ubhekane necala lokwamukela impahla entshontshiwe,” kusho u-Colonel Zwane.
UKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, u-General Bheki Langa uhalalisele ithimba lamaphoyisa ngokuthi libophe abasolwa ngokushesha.